जुनसुकै तन्त्रमा भ्रष्टाचारीकै बोलबाला!
आम समुदायको हित हुने विषयलाई लिएर कुनै एक जना मानिसले अनसन बस्दै आएको कुरा हामीले सुन्न थालेको लामै समय भइसकेको छ। वर्षौदेखि यसरी विभिन्न माग राख्दै अनसन बस्ने डा. गोविन्द केसीप्रति दिन प्रतिदिन जनसमर्थन बढ्दै गएको छ।
उहाँ फेरि अनसनमा बस्नुभएको बेलादेखि नै हामी चिन्तित भएका थियौं। यसपाला त अब झनै अघिल्ला सबैपटकभन्दा लामो अनसन भइसकेको अवस्था छ। हरेकपटक अनसनसँगै नेता र फरक फरक सरकारहरूले उहाँलाई आश्वासन पनि दिँदै आइरहेका छन्। त्यस्ता बचनबद्धता पूरा नगरेकै कारण उहाँ पटक पटक अनसन बस्नु परिरहेको सुनिन्छ। यो उहाँको निम्ति एक किसिमको बाध्यात्मक परिस्थिति भनेर मैले बुझेको छु।
यसपटकको अनसनको दिन निकै लम्बिसकेको अवस्थामा उहाँको स्वास्थ्य स्थितिलाई विचार गर्नै पर्छ। यसपटक अनसन तोडाउने बेला सरकारले दिएको प्रतिबद्धता पालना गराउने ग्यारेन्टी पनि आउनु जरुरी छ।
एउटा संवेदनशील चिकित्सक र आदर्श बोकेका सत्याग्रही हुन् डा. गोविन्द केसी। त्यस्ता मानिसले पटक पटक स्वास्थ्य र शैक्षिक क्षेत्रमा भइरहेका अनावश्यक गतिविधिविरुद्ध माग प्रस्तुत गरेका हुन्। त्यस्ता मानिसलाई अनसन बस्न बाध्य पार्नु नै विडम्वना हो।
मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा पनि के कुराले गर्दा एउटा सत्यको पक्षमा उभिएको चिकित्सकका माग पूरा हुन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। हामी धेरै आन्दोलन पार गरेर अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका हौं। यत्रो प्रयासबाट नयाँ संविधान बनिसक्दा पनि अझै पुरानै कालखण्ड सम्झाउने गरी एउटा डाक्टरले भ्रष्टाचारको कुरा उठाएर अनसन बसिराख्नुपर्ने असाध्यै लाजमर्दो हो।
उनले उठाएको कुरा समाजको हितमा हो भने समाजको अहितमा उभिने शक्ति अहिलेको बेला कसरी बलियो बन्यो? केसीको अवस्थाले मुलुकभरिका नेपालीको ध्यान त तानिरहेकै छ, काममा खटिनुपर्ने एउटा कर्तव्यनिष्ठ चिकित्सकको महत्वपूर्ण सेवा पनि नेपालीहरूले गुमाउनु परिरहेको छ। डा. केसी मात्र होइन सम्पूर्ण चिकित्सा क्षेत्र नै आन्दोलित भइरहेको अवस्था म देख्दैछु।
केसीले जे जे माग्छन्, त्यो सबै पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो तर्क होइन। नियुक्तिकै विषयमा पनि के कस्तो कुरा हो मलाई राम्ररी थाहा छैन। म आफैं पनि सरकारी नियुक्तिमा रहेको मानिस हुँ। तर, कुनै पनि नियुक्ति षडयन्त्रपूर्ण र गलत नियतले गरिएको छ भने चाहिँ त्यसमा मेरो विरोध रहन्छ।
खासगरी केसीका हकमा सरकारले जे जे आश्वासन दिँदै आएको छ, त्यसमा त गम्भीरता देखाउनै पर्छ। सहमति भइसकेका उहाँका माग अविलम्ब पूरा गर्नुमै बुद्धिमानी छ। कम्तीमा अबको समयमा शैक्षिक वा चिकित्सा क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हट्नुपर्छ भनेर कसैले माग राख्छ भने त्यसलाई तुरुन्तै सुनुवाइ गरिहाल्नुपर्छ।
मुलुकमा भ्रष्टाचारीहरूकै बोलबाला रहिरहने हो भने जुनसुकै तन्त्र आए पनि त्यसको केही माने रहँदैन। भ्रष्टाचारविरोधी केसीका माग चाहिँ सरकारले तत्काल सम्बोधन गरिहाल्नु पर्छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १६, २०७३ १६:१६:५१